Geerida Muxamed Cali oo laga tacsiyeeyay | Gaaloos.com
Home » News » Geerida Muxamed Cali oo laga tacsiyeeyay
Geerida Muxamed Cali oo laga tacsiyeeyay
Shakhsiyaad badan oo magac ku leh caalamka, gaar ahaan kuwa ciyaara feerka, ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Muxamed Cali, oo caan ku ahaa feerka, kuna dhintay cisbitaal ku yaalla Maraykanka asaga oo 74 jir ah.
“Waa maalin murugo badan. Muxamed Cali waxa uu ahaa qof aan jeclahay, saaxiibna ila ah. Weligii lama hilmaami doono, waxaana loo xusuusnaan doonaa sida Martin Luther King.” Waxaa sidaa yiri Don King oo suuqgeynta u qaabilsanaa feerka uu dheeli jiray Muxamed Cali.
“Muxamed Cali waxa uu ka mid ahaa dadka caalamka ugu wanaagsan ee aan la kulmay. Waxaan shaki ku jirin inuu ka mid ahaa dadka ugu wanaagsan xilligiisii.” Waxaa sidaa yiri George Foreman oo ay Muxamed Cali ku feertameen tartankii caanka ahaa ee la magac baxay Rumble in the Jungle.
“Xilli ay adkeyd in dadka madow ee Maraykanka ah ay xuquuqdooda u doodaan, ayaa Muxamed waxa uu u istaagay si uu difaaco waxa uu rumeysnaa in ay sax yihiin. Waxa uu ka dhigay dhammaan dadka Mareykanka kuwa xuquuqdooda u istaaga.” Waxaa sidaa yiri Kareem Abdul-Jabbar oo dheeli jiray kubadda kolayga.
“Ma jiri doono qof u dhigmi kara Muxamed Cali. Dadka madow ee caalamka ku nool ayaa u baahnaa Muxamed. Waxa uu noo ahaa cod. Waxa uu iga dhigay qofka aan ahay maanta.” Waxaa sidaa yiri Floyd Mayweather, oo marar badan ku guuleystay tartamo feerka caalamka ah.
“Waxa naga baxay qof weyn. Feerka waxa uu ka faa’iideystay khibradda Muxamed Cali, balse waxaa si weyn uga faa’iiday bani’aadanka oo uu tusay waxa ay tahay bani’aadannimada.” Waxaa sidaa yiri Manny Pacquiao, oo ka mid ah ragga ugu caansan feerka caalamka ee maanta.
Ugu dambeyntiina waxaa geerida Muxamed Cali ka tacsiyeeyay Donald Trump oo la filayo inuu musharrax madaxweyne u noqdo xisbiga Jamhuuriga Maraykanka, waxaana uu yiri “Muxamed Cali waxa uu ku dhintay da’da 74 jir! Waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan. Waana tebi doonnaa dhammaanteen!”
Title: Geerida Muxamed Cali oo laga tacsiyeeyay
Posted by Unknown, Published at 7:54 PM and have 0 comments